सिर्जयको झोलाको रहस्य खोल्न विवेकले जोखिम मोल्दा उब्जियो झगडा (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
डिसी नेपाल , २ पौष २०७५
दोहा, कतार । नेपालको चर्चित रियालिटी शो द भ्वाइस अफ नेपालको फाइनलका लागि दोहा आएका प्रतिस्पर्धी आइतबार राति यहाँबाट नेपाल प्रस्थान गरेका छन्।
टोली सोमबार विहान नेपाल पुगिसकेको छ।
द भ्वाइसको पहिलो संस्करणको विजेता भए-टिम दीप श्रेष्ठबाट सिडी विजय अधिकारी।
द भ्वाइसको पहिलो संस्करणमा चर्चाको केन्द्रमा रहे-सिर्जय थपलिया। उनी आफ्नो रहस्यमयी झोलाका कारण दर्शकको निशानामा परे। खाइलाग्दो ज्यान, बेग्लै कपाल र रक शैलीको हाउभाउ र प्रस्तुतीबाट उनी सधै नोटिसमा रहे।
सिर्जयसँग दोहामा एकै कोठामा बसेका विवेक वाइवा लामाको क्रेज पनि उस्तै लोभलाग्दो बन्यो। उनको खुलस्त र चक्लेटी स्वाभावले धेरैको मन जित्यो। यी दुई जोडी एकै कोठामा बस्दा विवेकले तीन पटकसम्म सिर्जयको झोला हेर्ने प्रयास गरे। त्यो क्रममा उनीहरूबीच हानाहान सम्मको स्थिति आएको विवेकले सुनाए।
झोलाको रहस्य खोल्न हरसंभव प्रयास गरेका विवेक र स्व्यं सिर्जयले डिसी नेपालसँगको यो संवादमा थप रहस्यहरू खुलाएका छन्।
उनीहरूबीचको मित्रता र झगडासम्मका सम्बन्धका रोचक प्रशंगमा गरिएको यो संवाद हेर्नुस्ः